Sida loola macaamilo caarada budada ah ee geedka tufaaxa
Iyada oo muuqaalka muuqaalka mycelium, careysiiso horumarinta xagta oo budada ah, dhirtu waxay noqdaan daciif, lumiyaan caleenta iyo ugxan, hoos u dhashooda, iyo xaaladaha daran ee la dayacay, xitaa noocyo dhaxan u nugul dhiman inta lagu jiro jiilaalka. Aynu eegno hanjabaadaha soo socda ee ay xaddidan yihiin budada budada, calaamadaha ugu horreeya ee geedka tufaaxa oo kuu sheegi doona sida wax looga qabto.
Sirqarinta beeritaanka si guul leh ee geedaha tufaaxa "Uralets"
Dhirta Apple "Uralets" waxaa loola jeedaa noocyada dayrta iyo waxay ku habboon tahay inay sii kordhaan gobollada waqooyiga. Qulqulayaasha koritaanka xoog leh, iska caabinta barafowga iyo difaaca jirka ee cuduro badan. Wax badan ayaan kuu sheegi doonaa maqaalka. Taariikhda xulashada Kala duwanaanta tufaaxa "Uralets" ayaa la soo gooyay bartamihii qarnigii 19aad ee xarunta Sverdlovsk.
Agrotechnics beerashada ee tufaax "Antonovka"
Beeralayda badani waxay tixgeliyaan tafaariiqda caadiga ah ee Antonovka inay noqoto mid ka mid ah noocyada ugu guulaha badan ee latitudes, waxaanu isku daraa tayada sare ee miraha iyo qiyaasta aan qarsooneyn marka la eego daryeelka. Aynu tixgelinno sifooyinka nafleyda iyo helitaanka shuruudaha beeritaanka iyo daryeel dheeraad ah.
Sirqarinta beeritaanka guuleysta ee tufaaxa "Pepin saffron"
Waxaa laga yaabaa in aysan jirin cid beerta oo aan aqoon u lahayn tufaax noocaan ah sida "Pepin Saffron." Bannaanka u badan iyo jacaylka miro yar ayaa doorbidaya noocyada kala duwan ee sida ugu quruxda badan, ugudhsan, dhadhan fiican leh, caan ah, oo leh, sababtoo ah miro kasta ee qaab kasta oo hagaagsan ee dhadhanka.
Dadka jecel Apple ayaa aad ugu mahadceliya kala duwanaanta Kandil Orlovsky. Waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ay ku koraan meelo kala duwan. In maqaalka waxaan kuu sheegi doonaa waxa miro mid u eg, sida loo doorto seedling iyo daryeelka geed. Taariikhda warshadda beerashada waxaa lagu magacaabi karaa dhalinyaro, tan iyo markii loo barbardhigay dhawaan.
Sida loo koro tufaax qurxoon qurux badan Nedzwiecki
Si loo baadho beerta quruxda badan, dadka degan xagaaga waxay si joogto ah u raadiyaan oo u beeraan geedo qurxoon. Apple Nedzvetskogo waa mid ka mid ah iyaga, sababtoo ah quruxdiisa waxaa inta badan loo isticmaalaa naqshada muuqaalka, iyo ka dib akhrinta sharaxaad iyo sawirka sawirka, waxaad fahmi doontaa sababta. Noocyada bayoolojiga ee Tree Tree Nedzvetskogo - mid ka mid ah ugu quruxda badan oo noociisa ah iyo leedahay marxalad xiiso leh.
Dhirta Apple "Antey": talooyinka ugu fiican
Tufaaxada casaanka ah ee kala duwan ee jiilaalka "Antey" waxaa lagu kala duwan yahay dhadhan wanaagsan, miisaan iyo tayada ilaalinta fiican. Mashiinka qallalan ee leh hawo wanaagsan, waxay socon karaan lix bilood. Isla mar ahaantaana, maqaarku ma lumin doono lafdhabarkiisa, jidhkuna wuxuu ahaanayaa mid casri ah sida haddii midhaha laga saaray geedkii. Waa maxay sifooyinka kale ee noocyo kala duwan leh, sida loo helo iyo si guul leh ugu kobciso qorshahaaga - waxaan ka sheekeyn doonaa arrinkaas.
Dhirta dhirta ayaa ah kuwa ugu caansan geedaha midhaha. Inkasta oo ay soo ifbaxeen noocyo cusub, badankood waxay door bidaan in la xaqiijiyo khadadka maxalliga ah. Ku saabsan mid ka mid ah kuwan ayaa ku sheegi doona dib-u-eegidgan. Ka fikir geed geedka tayada leh "Papirovka", sida loo sameeyo beerashada iyo daryeelka. Taariikhda warshadaynta ayaa loo tixgeliyaa caan - waxay u muuqatay natiijo ka timid pollination dabiiciga ah, waxayna caan ku noqotay bilawgii qarnigii 19aad.
Agrotehnika beerashada tufaax "Screen"
Waxaa laga yaabaa inuusan beerta hal mar lahayn geed geedka tufaaxa ah ee dalalkeena. Dhaqanka waa mid aan qabin xaaladaha cimilada, ma ahan mid madaxbannaan oo sii kordhaya, iyo weliba shaqada beeraha sannad kasta waxay keenaysaa inuu bannaanka xitaa noocyo xoogan oo leh dhamaan sifooyinka wanaagsan iyo ugu fiican. Taariikhda doorashada Apple "Screen" - noocyo isku dhafan ee koriinka dayrta.
Sirqarinta beeritaanka si guul leh ee tufaaxa "Astonisk"
Maalin kasta, cimiladu waxay noqotaa noocyo badan oo caan ah oo caan ah oo beeraley ah oo ku yaala dhulkeenna. In this article waxaan ku sharxi doonaa si faahfaahsan oo ku saabsan sifooyinka noocyo kala duwan iyo sida loo abuuro seedling dhalinyarada iyo koraan geed miro waaweyn. Taariikhda Is-beddelashada Tufaaxa kala duwan ee "Asterisk" ayaa lagu soo saaray Machurin Machadka ah ee Horumarinta iyo Genetics.
Beerta beeraha ee geedaha tufaaxa "Orlovim"
Waxaa jira geedo badan oo tufaax ah oo kobcaya xagaaga. Kuwaas waxaa ka mid ah kala duwanaanta Orlovim ee caanka ah. Dhirta Apple ee noocyada kala duwan ayaa iska leh hoggaamiyeyaasha geedaha soo daahay. In this article waxaan ka hadli doonaa geed geedka "Orlovim", sharaxaad ka mid ah kala duwan oo leh sawiro, iyo sidoo kale dib u eegista ee bannaanka u. Taariikhda Dhismaha 1977, noocyo kala duwan ayaa laga soo saaray Machadka Dhammaan Ruushka ee Dhismaha iyada oo la soo dhaafayo Antonovka oo leh SR0523 sapling.
Sirqarinta beeritaanka si guul leh ee geedaha tufaaxa "Imrus"
Maaddaama sifooyinka hidaha iyo astaamaha noolaha ee geedaha tufaaxa, kala duwan Imrus ayaa hogaaminaya liiska noocyada jiilaalka. Aqoonsiga beeralayda ee dhul-beereedka post-Soviet-ka waxay heleen fruiting xasilloon, dillaac, dulqaadka xaalado aan fiicneyn, caabiga cudurada iyo cayayaanka.
Sida loo daboolo geedka tufaaxa jiilaalka laga soo bilaabo dhaxan iyo jiirka
Marka jiilaalka yimaado, shaqooyinka xilliyada ee dalka iyo beerta ayaa istaagaya, tani macnaheedu maahan in dhirtu aanay u baahnayn daryeel. Geeduhu waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo, sida ku saabsan sida iyo sida loo hoyiyo geedo tufaaxa dhallinyarada xilliga qaboobaha, waxaan ka hadli doonaa maqaalkan. Sababtoo ah geedo hoy ah oo hoy ah Dad badan oo fahamsan wax yar farsamooyinka beerta, waxay u maleynayaan in hoyga dhirta qaboobaha ee jiilaalku ay lagama maarmaan tahay si aanay u burburin dhaxan qaboobaha xilliga qaboobaha.
Beerta Agrotechnics ee kalluunka macaan ee Ural
Nooc-geedeedka Ural wuxuu ka duwan yahay qaraabadiisa iyadoo dhadhankiisa iyo noocyada kala duwan ee isticmaalka. Midhaha geedka geedkan ayaa ku haboon labadaba isticmaalka cusub iyo qalajinta iyo samaynta saxarada. In this article waxaan soo bandhigi doonaa ishortaaga ah ee tufaax Ural Ural, sharaxaad faahfaahsan leh sawir, iyo sidoo kale agrotechnology ee beerashada iyo waxyaabaha gaarka ah ee daryeelka geed miro, oo ku salaysan talooyinka iyo dib u eegista beeralay khibrad leh.
Qarsoon ee beerashada guul leh ee tufaaxa Krasa Sverdlovsk
Milkiilaha kasta ee goobta wuxuu ku koraa mid ama nooc kale oo tufaax ah, taas oo ah shaqo guul leh ee jilayaasha. Kala duwan kasta wuxuu leeyahay dhinacyo fiican, waxaa loo qaabeeyay jawi iyo jawi gaar ah, sidaa daraadeed, waa suurtagal in la saaro midka ugu caansan ee lagu beeray dalka oo dhan. Waxaan si faahfaahsan u sharaxnaa kala duwanaanta qaboobaha ee tufaaxa Krasa Sverdlovsk, ka wada hadal qodobbada ugu muhiimsan ee la xidhiidha beerto iyo beerashada.
Xeerarka tufaaxa quudinta guga
Geed kasta oo tufaax ah xilliga xilli firfircooni sii kordhaya waxay u baahan tahay nafaqooyin. Sidaa daraadeed, kobaca sii kordhaysa iyo midhaha miraha waxay kuxirantahay wakhtiga iyo akhriska ee Bacriminta. Sida loo bacrimiyo geedo tufaax ah guga, taas oo ah habka loo doorto iyo waxa la keeno marxalad gaar ah ee horumarka - waxaas oo dhan ayaa looga hadli doonaa mar dambe maqaalka.
Goobta gawaarida xilliga dayrta si faahfaahsan
Bannaanka u badan oo ku doodaya marka ay ka fiican tahay in ay ku tukadaan geedo tufaax ah guga ama dayrta. Tababbarradu waxay muujinaysaa in marka la eego geedaha nooca abuurka, manjadu waxay noqon doontaa mid waxtar leh oo ku filan labadaba guga iyo dayrta labadaba. Maqaalkeena, waxaan si taxadar leh u tixgelineynaa nidaamka geedka dhirta qaboobaha xilliga Dayrta: Waxaynu baran doonaa dhammaan waqtiyada ku saabsan waqtiga, yoolalka iyo hababka dhacdadan, waxaan soo bandhigi doonnaa dhammaan faahfaahinta iyo falanqaynta dhammaan khaladaadka lagu sameeyey muddadan.
Agrotehnika geedaha tufaaxa koraya "Christmas"
Maanta waxaa jira tiro badan oo kala duwan oo ah geedo tufaax ah. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa geedka kirismaska ​​"geedka kirismaska", sharaxaad, sawiro iyo dib u eegis kaas oo aad ka heli karto maqaalkeena. Dhowaan, geedka waxaa laga heli karaa inta badan xagaaga xagaaga. Taariikhda Dhalida Qeybaha kala duwan ayaa la keenay sanadkii 1985 sababtoo ah isgoyska "Welsey" iyo "VM-41497".
Geedo ku habboon geedaha tufaaxa ee hore
Waxay badanaaba dhacdaa in dhirta tufaaxa ee ugu weyn ay bilaabaan inay soo saaraan wax ka yar iyo ka yar goosashada. Hase yeeshe, ka bilaabashada bedelkooda, waxaad samaynaysaa qalad weyn: khatarta aad ayay u weyn tahay in dhuubka yar yar uusan qaadan doonin xididada, waa inaad sugto muddo dheer ama ka yar fruiting waqti dheer, weligii ma hubsan kartid in ay noqon doonto tufaaxa.
Sirqarinta beeritaanka si guul leh ee tufaaxa ornamental "Royalties"
Markaad go'aansatay inaad dib-u-hagaajisid goobaha beertaada, waa inaad fiiro gaar ah u siisaa geed-geedeedka "Royalties". Geedka this qurux badan lagu beeray ma aha aawadood oo ah miraha dhadhan fiican, laakiin kaliya loogu talagalay midabka cagaaran iyo muuqaal qurux badan. Apple "Royalties" waxay si fiican u barteen magaalooyinka xaaladaha boodh aad u sareeya iyo wasakheynta gaasta, sidaas darteed waa qaab qurux badan oo ku saabsan naqshadeynta muuqaalka beeraha, garoomada iyo waddooyinka.